warkii.com » Taapsee”Aniga ma ahi dumarka ka faaideystaan geerida Sushant si ay magac u helaan sida Kangana oo kale oo cuqdadley ah” hadal jawaab celin kii ugu kululaa!!
Taapsee”Aniga ma ahi dumarka ka faaideystaan geerida Sushant si ay magac u helaan sida Kangana oo kale oo cuqdadley ah” hadal jawaab celin kii ugu kululaa!!
Dagaalkii Kangana hurisay waa siduu u bilawday ileen iyada isku kicisay Taapsee Pannu oo hadal adag kana daran Kangana markii dagaalka afka ah la joogo labadan atiriishana mudooyinkan dambe dagaalkooda wuu socday.
Kangana oo geerida Sushant iyo isqaraabeysiga ka hadleyso ayaa tusaalooyin usoo qaadatay Taapsee Pannu iyo Swara Bhaskar kuna tilmaamtay atiriishooyin heer labaad ah hadana A-Listers u qalmeen waxaana laga doortay ayee tiri Alia Bhatt iyo Ananya Panday oo iyagu laga qaab jiliin wacan yahay iyo quruxba waa sidee hadalka u dhigtee.
Taapsee oo ah ii bilaaw kaliya ayaa durba usoo jawaabtay jawaabihii hore mid kadaran ayee markaan tiri waxay dhahday iyadoo hadleysa,”waligey ma dhihin waxaan jeclahay Karan Johar mana oran waan necbahaya ee meesha aan ku dhahay Kangana ayaa laga rabaa ilee iyada laheed sidaase.”
“Balse xaqiiqada ayaa ah Kangana qofka jeceshahay iyadu wey necebtahay qofka necebtahayna iyadu wey jeceshahay waa ruux bil-cagsi ah iyada dhan mida kale aniga Karan sifiican isuguma dhowin waligeyna waxaan salaam ahen nama dhexmarin mana dhicin inaan sheeko gaar ah iyo waqti fiicano isla qaadaynayba dusha sare unbaan ka xiriiri jirnay.”
“Anigu waan diiday inaan noqdo cuqdadley aan ilaawin xurguf hore qof dhexmareen sida Kangana oo kale waxaan kaloo diiday inaan magac iyo shacbiyad ku raadiyo meedka Sushant sida Kangana oo kale waxaan kaloo ugu dambeyn diiday inaan meel oga dhaco sharafka shirkadii naga dhigeen xidigo la aqoonsado xili shalay aan aheen dad caadi ah… ogow Bollywood waa shirkadii atiriiisho la aqoonsado kaa dhigtay ma ahan inaad maanta iyada fadexeeyso niyadana ka disho jiilka dambe ee rajada ka qabaan inee halkaan imaadaan.”